Ra’iisul Wasaaraha, Hogaamiyeyaasha Puntland iyo Jubbaland oo kulan saddex geesood uga socda Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ayaa sheegaya qodobada looga hadlayo kulankan uu qeyb ka yahay arrinta Maamulka Galmudug oo horay Puntland ay sheegtay in dhismihiisu hab sharci darro loo maray
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo inta uusan gaarin tagin Garowe ku hormaray Cadaado, ayaa kula kulmay Madaxweynaha cusub ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, waxaana Maamulka Galmudug ay u sheegeen in wax walba oo wada hadal lagu xalin karo tabashada jirta inay diyaar u yihiin.
Sidoo kale waxaa shirka intiisa badan diirada lagu saaraya qodobo ay Puntland sheegtay in laga badalay Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya iyo Heshiisyo ay horay u wada galeen Federaalka iyo Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa doonaya in cabashada ay ka qabaan Federaalka ay dowladda xal u keento, gaar ahaan arrinta Maamulka Galmudug oo ay dhismihiisa qoonsadeen, waxaana Baarlamaanka Puntland dhowaan qodobo ka soo saaray guddiyadii Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyay oo ay ku tilmaameen in aan lagala tashan.
Hogaamiyeyaasha Puntland iyo Jubba ayaa is-gaashaanbuursi ka sameynaya arrinta Federaalka, waxaana ay horay ay ugu eedeeyeen dowladda Federaalka inay jebisay qodobo ka mid ah dastuurka KMG.
US issues travel alert in Kenya ahead of Obama visi